काभ्रेमा भित्री बस्त्र मात्र लगाएर आत्महत्या ! यस्तो छ घटनाक्रम - Maxon Khabar
Home / News / काभ्रेमा भित्री बस्त्र मात्र लगाएर आत्महत्या ! यस्तो छ घटनाक्रम
काभ्रेमा भित्री बस्त्र मात्र लगाएर आत्महत्या ! यस्तो छ घटनाक्रम
मंसिर ०३ काभ्रे, । काभ्रेमा क्याम्पस जान भनेर एका बिहान घरबाट निस्केकी एक युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् । काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिका वडा न- ५ बस्ने बर्ष २१ का सुधा केसी घर नजिकै को रुख्मा झुन्डिएको अवस्थामा रहमस्य रुप्मा मृत फेला परेकी हुन् । उनी BA दोस्रो बर्षमा अध्यानरत थिइन् ।
आखिर कसरी भयो यो घटना ? घटनाको अघिल्लो रात(हिजो बेलुकी ) पारिवारिक स्रोतका अनुसार मृत सुधा केसीका आमा र सानिमा एउटा पलंगमा र सुधा अर्को पलंगमा एकै कोठमा सुतेका थिए । ५ बजे बिहान सुधा कलेज जना भनेर तयार भएछन । एकादशीको दिन किन कलेज जानु भनेरआमा र सानिमाले कलेजनजान अनुरोध गरे का रहेछन तर उनले इन्कार गरि निस्केछन । मुख धुन , दात माझन वा कलेज नै गएको होला भन्ने सोचेर परिवारले पनि पनि चासो दिएनन् । तर उनी ७ बजे त रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । अचानक उज्यालो भएपछि एक केटि झुण्डिएको खबर टोल भरी फैलियो ।
आमा र सानिमाले गएर हेर्दा कलेज जान भनेर हिडेकी सुधा झुन्दिएको अवस्थामा मृत थिइन् । घटना स्थलमा उनी भित्रि बश्त्र (ब्रा र पेन्टी) मा मात्र थिइन् । उनले लगाएको ज्याकेट, टि शर्ट, समिज , जिन्सको पेन्ट , ट्राउजर र चप्पल त्यहि रुख नजिकै फेला परेको थियो । प्रत्यछे दर्शिका अनुसार उनले लगाएको ड्रेसअपमा सलको आवश्यकता पर्दैन उनले घर बाट नै आत्महत्या गर्ने उदेश्यले सल लिएको आएको देखिन्छ । अरु कसैले आएर सडकको छेउ मै युवतीको ति टाइट कपडा खोलेर बलात्कार गरी हत्या गरेको जस्तो भने देखिदैन ।
। उनले आत्महत्या नै गरेको हो भन्न सकिने अवस्था नरहेको डिएसपी गिरीको भनाई छ । आत्महत्यामा उनकै सल प्रयोग गरिएकाले घटना थप रहस्यमय बनेको थियो ।
त केही बेर अगाडि मात्र युवती मृत्युको कारण घरायसी: युवतीको मृत्युको कारण घरायसी झगडा नै भएको खुल्न आएको छ । विहान कलेज ड्रेस लगाएर पढ्न जान लागेकी छोरीलाई आमाले आज एकादशी हो घरमा पूजा पनि गर्नु पर्छ । कलेजमा पढाई पनि हुदैन होला, नजाउ कपडा खोलेर घरैमा बस भने पछि युवती आमासँग रिसाएर घरबाट बाहिर निस्केकी थिइन् । घरबाट २ मिनेट पर गएर 'ल कपडा खोल भनेको होइन' भन्दै रिसाउँदै युवतीले आफूले लगाएको कपडा खोलेर एकैठाउँमा थुपारेपछि आफू झुण्डिएकी थिइन् । उनको परिवारले छोरीको हत्या नभएर आत्महत्या नै भएको स्वीकारेको छ भने अस्पतालबाट पोष्टमार्टम गरि शव पनि बुझेर लगेका छन् ।
केन्द्र बिन्दु dot com मा खबर छ